Ny fandaharan’asa Tosika Kere any atsimon'i Madagasikara | UNICEF Madagasikara
02 Jona 2021
I Soanatoetse dia renim-pianakaviana 35 taona, manan-janaka miisa 10 ary mipetraka ao Fenoaivo ao amin’ny Kaominin’Ifotaka, Distrika Amboasary Atsimo. Nisitraka ny tohana ara-bola Fiavota ny fianakaviany nanomboka ny taona 2016 noho ny fandraisan’anjaran’ny UNICEF. Araky ny nambaran’i Soanatoetse, ny Fiavota na ny fanavotana amin’ny tenim-paritra eo an-toerana no nahafahan’ny fianakaviany nanatsara ny fari-piainan’izy ireo ary indrindra nahafahany nampianatra ny zanany.
Indrisy, ny taona 2020 dia namely mafy ny Kaominina Ifotaka ilay hain-tany mamaivay any Atsimo. Tsy afaka namboly ireo mponina noho ny tsy fahampian’ny rotsak’orana ka dia tsy nisy ny vokatra, nihena tsy nisy toy izany ny fidiram-bola, ary nitombo kosa ny fandaniana tamin’ny resaka sakafo. Tsy afa-niala tamin’io toe-javatra nanahirana io ny fianakavian’i Soanatoetse.
Saingy ho azy manokana dia nahafahany niatrika izany toe-javatra izany ny fanampiana ara-bola Fiavota noho ireo tahiry sy fampiasam-bola nataony tany aloha. « Raha tokony namokatra sy nivarotra izahay hampidiram-bola bebe kokoa, dia tsy maintsy nividy sakafo teny an-tsena. Nanana fahafahana nividy izahay satria nanana tahiry. Saingy nanomboka nihavitsy ireo mangahazo sy katsaka ary vomanga namidy teny an-tsena, ka tsy nitsahatra niakatra ny vidiny. Mba hahafahanay mivelona dia voatery ho indray mandeha isan’andro ihany izahay no nisakafo, » hoy izy feno alahelo. Raha ny filazany azy dia isan’ny fotoana mafy indrindra teo amin’ny fiainany ity hain-tany ity. Nandritra ireo taona maro nifandimby, voa-na raketa no nohanin’ny tokantrano tsirairay rehefa fotoan-tsarotra toy izao. Saingy tamin’ity taona ity dia na ny raketa aza dia tsy nisy voany vokatry ny hafanana be loatra sy ny tsy fisian’ny orana. «Tsy mahita voa-na raketa intsony izahay, na ireo raketa mena aza, raha tsy any amin’ny kilometatra maro miala ny tanàna misy anay», hoy izy nanohy.
Vao fantatr’i Soanatoetse fa niakatra 80 000 Ar (22 dolara) isam-bolana ny vola azon’ny fianakaviany ao anatin’ilay Fiahiana ara-sosialy “Protection Sociale Réactive aux Chocs” (PSRC) na ny « TOSEKE KERE » izay midika hoe ady amin’ny mosary, dia izay vao nisento izy ary velom-bolo indray. « Nisy fotoana izahay tena efa kivy tanteraka ary tena very fanantenana. I Nasoloazo zanako, izay vao roa taona monja dia tratry ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika (MAM). Very hevitra aho tamin’izay ary tsy hitako intsony izay nantenaina. Noho io tosika ara-bola isam-bolana io anefa, dia afaka hamaha ireo olana laharam-pahamehana ho an’ny ankohonako aho, tsy inona izany fa ny sakafo, ny fahasalaman’ilay zanako kely, ary tsindrin-tsakafo kely hampazoto ireo zanako mandeha mianatra. Rehefa avy notsaboina tao amin’ny ivon-toerana misahana ny fanjarian-tsakafo i Nasoloazo dia efa afaka misakafo tsara izy amin’izao isaky ny mahatsiaro noana », hoy izy tamin-kafaliana.
Tanteraka ny fanovana ilay fandaharan’asa fandefasana vola mitohy Fiavota ho lasa Toseke kere na Tetik’asa fiahiana ara-tsosialy « Programme de Protection Sociale Réactive aux Chocs », izay manampy tokantrano maherin’ny 4.000, noho ny fanampiana avy amin’ny Foreign, Commonwealth & Development Office avy any Angletera ho an’ny UNICEF Madagascar.